Ciidanka Jubbaland Oo Burburiyey Fariisimo Ay Lahayd Kooxda Alshabaab.
October 11, 2017 - Written by Kulmiye
Wararka ka imaanaya Gobolka Jubbada Hoose ayaa ku waramaya In Ciidamada Nabad Sugida maamulka Jubba-land ay howlgal ka fuliyeen galinkii hore ee shalay deegaano ku dhow magalaada Kamsuuma oo qiyaastii 90 KM dhanka waqooyi kaga beegan magaalada Kismaayo.
Taliye ku xigeenka Nabadsugidda Jubaland Axmed C/laahi Ciise (Gaas) oo la hadlay warbaahinta ayaa sheegay in shalay galinkii hore ay weerar qorsheysan ku qaadeen saldhig ay Al-shabaab ku lahaayeen nawaaxiga deegaanka Kamsuuma ee Gobolka Jubada Hoose.
“Ciidamo ka tirsan nabadusgida Jubba-land waxa ay ka talaabeen Webiga dhinaca Buulogaduud, waxaa bartilmaamdeed u ahaa fariisin ay Al-shabaab ku lahaayeen nawaaxiga Kamsuuma, goobtaasi waxa ay ahayd goob ay jidgooyo u taal oo ay gaadiidka lacago uga qaadi jireen, qasaarooyin ayaan u geysannay, waxayna u carareen dhanka Kamsuuma,” ayuu taliyuhu Yiri.
Waxa uu sheegay Sidoo kale in ay saldhigga ugu tageen xoolo ay Al-shabaab Zako ahaan uga soo ururiyeen dadka xoolaleeyda ah iyo lacago, isagoo sheegay in qasaarooyin isugu jira dhimasho iyo dhaawac ay u gesyteen.